Vivo Nex: Mobilka cusub ee shirkadda oo leh naqshad shaashad Ultra FullView ah | Androidsis
Saacado aad u yar kahor, Vivo waxay ku dhawaaqday Vivo Nex saddex nooc oo kala duwan, shirkadda cusub ee terminal-ka kaas oo imanaya ka dib soo bandhigida Vivo Apex ee Shirweynaha Caalamiga ah ee Moobilka ee Barcelona kaas oo dhacay dhammaadkii Febraayo. Xusuusnow in tan labaad ee la soo sheegay la wada fahmay iyadoo lala socdo kamarad si fudud looqancin karo iyo shaashad ay kujiraan 98% dhamaan qeybta hore.
Vivo Nex wuxuu la yimaadaa qeexitaanno farsamo oo, shaki la'aan, kuwa kale gariiri doonaan kalsooni suuqa oo ay ugu mahadcelinayaan sifooyinkiisa uqalma kala duwanaanta-dhamaadka sare ee wax badan ballan qaada. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Qalabkani wuxuu ku yimaadaa qalab leh shaashad dhererkeedu yahay 6.59-inch Super AMOLED Ultra Fullview at a FullHD + resolution of 2.316 x 1.080 pixels that occupies 91.24% of all the first space. Telefoonku wuxuu la yimaadaa farsamo Shaashada SoundCasting taas oo asal ahaan ka dhigan tahay in ku hadlayaasha ay ku dhexjiraan shaashadda. Maxaa intaa ka badan, dhammaan dareemayaasha aaladda ayaa ku hoos qarsoon, oo ay ku jiraan akhristaha faraha.
Xiidmaheeda, Nex waxaa ku shaqeeya octa-core Qualcomm Snapdragon 845 SoC oo ay weheliso Adreno 630 GPU, 8GB oo RAM ah, 256GB oo ah kaydinta gudaha ah waxaana ku shaqeeya batari 4.000mAh ah.
Waxa kale oo jira laba nooc oo kale: Mid dhex-dhexaad ah oo leh isla cabiraado farsamo oo la siiyay marka laga reebo xusuusta RAM oo ah 6GB iyo ROM-ka oo kaliya ah 128GB, iyo mid aad uga hooseeya oo la imanaya qalabka cusub ee Qualcomm Snapdragon 710, iyo 6GB RAM iyo 128GB ah. ROM sidoo kale. Inta soo hartay, arrimuhu wali waa isku mid saddexda xarumood.
Sida qaybta sawirada, Vivo Nex wuxuu la yimaadaa kamarad gadaal ah oo 12-megapixel ahDareemka ugu weyn wuxuu yahay Sony IMX363 oo leh 1.4 pim pixels, f / 1.8 aperture iyo afar-dhidibka muuqaalka muuqaalka, iyo midka labaad oo leh xallinta 5MP. Sida kamaradda hore, tani waa a pop ip 8 megapixel oo aan qarin karno markasta oo aan rabno.
Qalabka sidoo kale wuxuu leeyahay Vivo Game Engine, oo lagu sameeyo iskaashi lala yeesho Ciyaaraha Tencent. Ujeedada astaantani waa in la bixiyo waayo-aragnimo ciyaar ku saleysan softiweer iyo qalabaynta qalabka. Maxaa intaa ka badan, ayaa si gaar ah loogu habeeyay inay ku shaqeeyaan ciyaaro lagu abuuray Qalabka aan-dhab ahayn. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale soo bandhigaan 3 kanaal 7.1D nidaamka dhawaaqa hareeraha ah oo ay ugu mahadcelinayaan ururka dtsX, waxayna leeyihiin Vivo Hi-Fi V1 Nidaamka Teknolojiyada ee loogu talagalay codka aaminaadda sare ee dhegaha.
Telefoonada casriga ah ayaa sidoo kale la yimid iyagoo qalabaysan Jovi, oo ah kaaliyaha codka shaqsiga ee shirkadda ee ku shaqeeya tikniyoolajiyadda sirdoonka macmalka ah.. Waxay la jaan qaadayaan shaqooyin kala duwan, sida akhrinta khariidada caqliga badan, encyclopedias, dukaamaysiga, turjumaada waqtiga-dhabta ah, iskaanka, iyo aqoonsiga shaashadda, iyo kuwa kale. Waxay sidoo kale la yimaadaan istiraatiijiyad isticmaale isticmaale cusub oo Energy ah, Lakabka habeynta Vivo ee ku shaqeeya nidaamka hawlgalka Android Oreo sanduuqa. Tan ka sokow, boosteejooyinka ayaa sidoo kale la jaan qaadaya SDK hagaajinta heerka mashiinka, waxay taageertaa teknoolojiyada anteenada HPUE, iyo nidaamka qaboojinta ee ka ilaalin doona taleefannada taleefannada kuleylka.
Qiimaha iyo helitaanka Vivo Nex
Vivo NEX waxaa lagu heli doonaa labo ikhtiyaar oo midab leh: Diamond Black (madow) iyo Ruby Red (casaan). Qaabka-dhamaadka sare leh 8GB oo RAM ah iyo 256GB oo ah xasuusta gudaha ah ayaa lagu qiimeeyay 4.998 yuan, taas oo u dhiganta qiyaastii 662 yuuro, halka qalabka dhexdhexaadka ah uu ku fadhiyo 4.498 yuan (qiyaastii 595 euro) Dhinaca kale, nooca ugu jaban ee processor-ka Qualcomm Snapdragon 710 wuxuu marayaa 3.898 yuan, oo qiyaas ahaan u tarjumeysa qiyaastii 516 euro.
Amarada hore ee taleefanka gacanta ayaa berri ka bilaabanaya Shiinaha, laakiin shirkaddu wali ma aysan shaacinin goorta rasmiga ah ee si joogto ah looga sii deyn doono suuqa, sidoo kale haddii si caalami ah loo suuq geyn doono. Aan rajeyno sidaas…
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Vivo Nex: Mobilka cusub ee shirkadda oo leh naqshad shaashad Ultra FullView ah
[APK] LinageOS Kow iyo toban Ciyaaryahan oo Muusig ah